हिमालय खबर | के एनआरएनएको औचित्य समाप्त भएको हो
के एनआरएनएको औचित्य समाप्त भएको हो
हिमालयखवर संवाददाता ,
प्रकाशित १० बैशाख २०७९, शनिबार | 2022-04-23 02:11:52
अमेरिका- विदेशमा बस्ने नेपालीको पक्षमा काम गर्न भनेर गठन भएको गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को औचित्य समाप्त भएको हो ?
सामाजिक संजाल र अनौपचारिक रुपमा आएका प्रतिकृयाका आधारमा भन्ने हो भने एनआरएनएको औचित्य समाप्त भएको छ । झण्डै ६ महिना चलेको नेतृत्व चयन विवाद र त्यस पछि हचुवाका भरमा गठन गरिएको पदाधिकारी चयन कमैलाई मन परेको छ । मुख्य पदमा चयन भएका समेत खुशी छैनन् ।
एनआरएनए अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धि सुवेदीका अनुसार अहिलेसम्म आईसीसी पदाधिकारीको को हुन् भन्ने औपचारिक जानकारी समेत एनसीसीलाई दिईएको छैन ।
एनसीसी मध्येमा सवैभन्दा धेरै सदश्यता भएको एनआरएनए अमेरिकामा अहिले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव सहित सानो तिनो मञ्चमा नअट्ने पदाधिकारी छन् । तर, यति धेरै पदाधिकारीको औचित्यका वारेमा अमेरिका भित्रै प्रश्न उठेको छ । यत्रा पदाधिकारी हुदां पनि एनआरएनए अमेरिका विवादित छ ।
विदेशमा वस्ने नेपालीले थुप्रै हण्डर पाएका छन् । दुख्ख गरेर कमाएको पैसाले केही सुन वा अलि ठुलो टेलिभजन ल्यांउदा एयरपोर्टमा अनेक अझमेला गरिन्छ । नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको विषय प्रभावकारी रुपमा मुद्दा वन्न सकेको छैन । विदेशमा वस्ने नेपालीका लागि नेपालमा सम्पत्ति र राजनीतिक अधिकारको विषय जटिल वनाईएको छ ।
ठुलो व्यापार घाटाले गर्दा देशमा विदेशी मुद्राको अभाव भएको छ । अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले नेपालमा डलर खाता खोल्न आग्रह गरिरहेको छ । तर, एनआरएनएले यस्ता मुद्दालाई प्रभावकारी रुपमा राख्न सकेको छैन । विवाद मिलाउन राजनीतिक पार्टी र सरकारलाई सकृय गराउंदा एनआरएनए अरु कमजोर वनेको छ । पछिल्लो विवादले विदेशमा वस्ने धेरै नेपाली एनआरएनएसंग टाढिन थालेका छन् । आफ्ना मुद्दालाई प्रभावकारी रुपमा उठाउने कुनै विकल्प खोज्दै छन् ।
विदेशमा वस्ने नेपाली गैर आवासीय नेपाली हुन् । तर, एनआरएनएको सदश्यता लिनेको संख्या भने निकै सानो छ । अहिले ५० लाख भन्दा वढी नेपाली विदेशमा रहेको अनुमान छ । तर, एनआरएनएको सदश्य संख्या भने जम्मा १ लाख ६ हजार मात्र छ ।
दुई बर्ष अघि एनआरएनएले १० अर्व रुपैंयाको महत्वकांक्षी लगानी कोषको अवधारणालाई छिटो गतिमा अघि वढाएको थियो । तर, संस्था भित्र विवाद आएपछि यो कोष पनि संकटमा परेको छ ।
एनआरएनएले आफ्नो साख फर्काउन निकै ठुलो मेहिनेत गर्नु पर्ने अवस्था छ । तर, यस तर्फ संस्था अघि वढेको छैन । त्यसैले यसको औचित्य समाप्त हुदैं गएको छ ।
हिमालयखवर संवाददाता -
टेक्ससको स्कुलमा गोली चल्दा एक शिक्षक र १४ जना बालबालिकाले ज्यान गुमाए
रेष्टुरेन्टहरुमा ग्राहक बढाउन सेलिब्रेटी ल्याउने क्रम तीब्र
ड्यालसमा बुद्ध जयन्ति कार्यक्रम भब्य रूपमा सम्पन्न
अमेरिकामा घर किन्न खोज्ने घटे, अव मूल्य घट्ने संभावना
काठमाडौँमा बालेन जित तर्फ उन्मुख, गगन क्रेजलाई चुनौती
विदेशमा वस्ने नेपालीले नेपालमा डलर खाता खोल्न चासोनै देखाएनन्
नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ (नेजा)को आयोजनामा टेक्ससमा रक्तदान सम्पन्न ( भिडियो सहित)
एएनएको ड्यालस सम्मेलन भव्य बनाउने तयारी
डा. भगवान कोइराला ह्युस्टन आउने
बालेन शाहले जित्ने प्रारम्भिक अनुमान
एनआरएनएको अनुरोध कसैले पनि सुनेन
हिमालयखवर संवाददाता ३ जेष्ठ २०७९, मंगलवार
अमेरिका - नेपालमा विदेशी मुद्राको अभाव टार्न विदेशमा वस्ने नेपालीका लागि अमेरिकी डलरमा खाता खोल्न अभिपे्ररित गर्ने उद्देशयले विभिन्न प्रभावधान ल्याईपनि यो असफल भएको छ । विदेशमा वस्ने नेपालीले नेपा ...
एनआरएनए अमेरिकाले आईसीसीलाई १ करोड १७ लाख रुपैंया वुझायो
हिमालयखवर संवाददाता १७ बैशाख २०७९, शनिबार
अमेरिका - गैर आवासीय नेपाली संघ एनसीसी अमेरिका (एनआरएनए अमेरिका)ले आईसीसीलाई वुझाउन बांकी रकम भुक्तानी गरेको छ । आईसीसीले एनआरएनए अमेरिकावाट १ करोड १७ लाख ३४ हजार ४८८ रुपैंया पाएको बताउंदै धन्यवा ...
हिमालयखवर संवाददाता १३ बैशाख २०७९, मंगलवार
एनआरएनए नेतृत्व सहमति, अधिकांश साधारण सदस्य भने दु:खी
हिमालय खबर १४ चैत्र २०७८, सोमबार
सहमतिका नाममा जे मनलाज्यो त्यही गर्ने कार्य कम्यूनिष्ट वा तानासाही व्यवस्था र पार्टीमा हुने गरेको थियो । प्रजातन्त्रमा हुदैनथ्यो । तर, गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) नेतृत्वका लागि यस्तै सहमति भयो । ...
पोखरालाई समृद्ध बनाउने काम गर्छौं : नवनिर्वाचित प्रमुख आचार्य
युएस-नेपाल पोलिसी रिसर्च सेन्टरको सातौैँ वार्षिक सम्मेलन सम्पन्न
डाक्टर भगवान कोइरालाको अभियानलाई ड्यालसबाट झण्डै दुई लाख डलर सहयोग
समाज , १० जेष्ठ २०७९, मंगलवार